Maxay ku kala duwan yihiin Deni & Gaas dhanka khilaafka Madaxwayne Xigeenka? | Hadalsame Media
Home Maqaallada Maxay ku kala duwan yihiin Deni & Gaas dhanka khilaafka Madaxwayne Xigeenka?
Maxay ku kala duwan yihiin Deni & Gaas dhanka khilaafka Madaxwayne Xigeenka?
(Hadalsame) 21 Agoosto 2019 – Madaxweyne Siciid Cabdullaahi Dani fursad ayey u tahay khilaafka yarka ah ee soo dhexgalay isaga iyo Madaxweyne Kuxigeenkiisa, sababtoo ah waxa ay horseedi karta wada shaqeyn iyo isu soo dhawaansho loo baahan yahay in uu ka dhex jire labada qof ee ugu sarreeya hoggaanka Puntland.
Labada hoggaamiye ee dadku ay wada fiirsanayaan waxa ay ku kala badbaadi karaan waa dastuurka iyo xeerhoosaadyada, balse nasiib darro qabyo badan iyo hoosaasin dhankaas ah ayaa ka jirtay Puntland, taas oo ay sababtay duruuftii adkayd ee jirtay xilligii aasaaskii Puntland iyo in la wada qanciyo qabaailka qaar.
Khilaaf noocaan ah oo ka dhaca Puntland ogaalkayga waxaa ugu horreyey Maamuulkii Madaxweyne Gaas iyo Camey oo ay muhiim tahay in lagala baxo casharkii diblumaasiyadeed ee Madaxweyne Cabdiwali uu ku xalliyey khilaafkaas.
1. Madaxweyne Gaas marnaba kama ficiltamin tallaabooyinkii ka dhanka ahaa ee uu qaaday Madaxweyne Camey, isagoo inta badan ka fogaan jiray xitaa in uu hadalladiisa ku muujiyo wax khilaaf ah oo ka jira Puntland, waana xikmaddii Carbeed ee dhahaysay “Ma ficiltamo Ninka reerka ugu weyn” “وليس كبير القوم من يحمل الخقد”
2. Madaxweyne Gaas ma deegaamayn, mana qabiileyn xurgufta siyaasadeed ee kala dhaxeysay Kuxigeenkiisa, bal waxa uu muujiyey in uu doonayo “dib u soo celinta” Gobolka Sool, taas oo caksi ku ah tallaabadii uu qaaday Madaxweyne Dani oo khilaafkii ugu horreyey ee dhex yimaada isaga iyo Kuxigeenkiisa muujiyey in uu ka tanaasuli karo Gobolka Sool, bacdamaa uu sheegay in uu wada hadal kala galayo Soomaaliland.!!
3. Madaxweyne Gaas waxa uu sanaddadii ugu danbeeyey kala qorsheeyey shaqooyinka Madaxtooyada, isagoona arrimo gaar ah u xilsaaray Madaxweyne Kuxigeenkiisa, taas oo hoos u dhigtay heerka khilaafka dhexdooda yaalley.
Previous articleMa Axmed Madoobe ayaa Itoobiya neceb? (Arag jawaabta & kaalmaysiga DF ee Itoobiya…!!!)
Next articleDAWO DILAA AH: Dawo dhacday oo fara ba’an ku haysa dalal ay Somalia ka mid tahay, WHO